नेकपाबाहिरको व्यक्ति वा शक्तिले नबुझ्ला ! नेकपाजनले बुझेको हुनुपर्छ । - Nigranitimes
होमपेज / मुख्य खबर / नेकपाबाहिरको व्यक्ति वा शक्तिले नबुझ्ला ! नेकपाजनले बुझेको हुनुपर्छ ।
नेकपाबाहिरको व्यक्ति वा शक्तिले नबुझ्ला ! नेकपाजनले बुझेको हुनुपर्छ ।
बुधबार, बैशाख १७, २०७७ , निगरानी टाइम्स
लेखक : युवराज बास्कोटा यज्ञ
पथरीशनिश्चरे –१०, मोरङ
सााच्चो कुरा के हो भने–
१) पूर्ववर्ती एमाले–माओवादीबीचको एकता प्रक्रियाको एउटा मियो नेता केपी शर्मा ओली हो भने अर्को मियो नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हो । दुबै नेताको आ–आफ्नै अहम् योगदान र अग्रणी भूमिका छ । यसको प्रतिफलस्वरुप नेकपा निर्माण भएको छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया टुंगिएको छैन । यसबीचमा कुनै एकको विकल्प अर्को हुन सक्दैन । कोही पनि निर्विकल्प नेता हुन सक्दैन । कि के हो ? म कुरा बुझ्दिना ।
२) राजनीतिक बैचारिक मतभेदको अन्तिम टुंगो लाग्ने थलो– महाधिवेशन हो । बहस र छलफलको महाधिवेशनकक्षमा हामी पुग्न सकिरहेको छैन । पुग्ने काम र कोर्स बााकी छ । पुग्न अनिवार्य छ । अन्तरसंगठनात्मक जीवनमा अहिले नै परस्पर अविश्वास, वैरभाव, अन्यमनस्कता, तिक्तता, कटुता, आरोप–प्रत्यारोप आदि पोख्ने बेला होइन । यसले हाम्रो एकतालाई खादिलो बनाउन सक्दैन । संगठित कम्युनिष्ट आन्दोलन र यसको उपस्थितिविरुद्ध सक्रिय केही आन्तरिक र बाह्यशक्तिलाई एकोहोरो मद्दत मात्र पुग्छ ।
३) हामी अलगथलग हुादा हाम्रो आ–आफ्नो अवस्था र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको हविगत के थियो ? आज झण्डै दुई तिहाई नजिक प्राप्त जनमतको आाखाले होइन, हिजो संगठन, सडक र संघर्षमा हुादाका आाखाले हेर्नुपर्छ । विभिन्न बेलामा मिचिादै, डसिादै, हेपिादै र कैयौं हेपाइलाई सहादै कहिले काङ्ग्रेस र कहिले राप्रपालगायतको शक्तिसाग सहकार्य गर्नुपरेको वाध्यकारी अवस्था के थियो ? सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिनुपर्छ ।
४) सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा नेकपा र नेकपाको तर्फबाट अघि सारिएका बामगठबन्धनका साझा उम्मेदवारले पाएको मत भनेको ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्नमा तात्कालीन नेकपा (एमाले) को तर्फबाट अध्यक्षका हैसियतले नेता केपी शर्मा ओलीले खेल्नुभएको भूमिका, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा मुर्छित अवस्थाबाट ब्यूातिएका कैयौं आशा, अपेक्षा, महत्त्वाकांक्षा र सपनाहरू, भारतीय पक्षको अनुचित् बेलामा अनुचित् नाकाबन्दीविरुद्ध उहााको दृढ अडान आदिको प्रतिफल र समुच्य परिणाम हो कि होइन ? हृदयांगम गर्नुपर्छ ।
५) ठीकै हो– नेकपाको विकल्प नेकपा नै हो । राजनीतिक वस्तुस्थिति प्रतिकूल छैन, अनुकूल नै छ । उतारचढाव केही छैन । नेकपाले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्ने अवस्था छ । यसको अभिभावकीय भूमिकामा मूलत: ४र५ जना नेतृत्व अहोरात्र क्रियाशील छ । योगदान र योग्यताका कारण उहााहरू समान र समकालीन हुनुहुन्छ । उहााहरू माझ एउटाको विकल्प अर्को कसरी हुन सक्छ ? कुन मनाशयले काम गरेको छ ? आवश्यकता के हो ? अध्ययन गरिनु पर्छ ।
६) नेकपाले प्राप्त गरेको जनमत जनयुद्ध र जनान्दोलनबाट स्थापित जनादेशहरू पूरा गर्न, देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, नेकपाको अगुवाइमा प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धीहरू बचाउन, यसको संस्थागत विकासक्रममा प्राप्त संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्न र समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकास र सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनको रुपान्तरण होइन ? यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण पहिलो र अपरिहार्य शर्त होइन ? अहिले नेतृत्व फेरबदलको प्रयासले तल–तलसम्म उब्जने प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छ ? जिम्मेवार सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न र कार्यान्वयनमा लिन अनिवार्य छ । नत्र, हामी नेकपाजनलाई आध्यारो सुरुङभित्र जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन । यसबेला हाम्रा आ–आफ्ना नाङ्ले पसलबाट केही बिक्नेवाला छैन । ग्राहकले हामीलाई वास्तै नगरी उपस्थित हुने अर्को विकल्प चाहर्ने छन् । त्यो दिन नआओस् !
सबैप्रति उाचो सद्भाव समर्पित अपेक्षा सहित अन्तर्रा्ष्टि्रय श्रमिक दिवस– मे १ को अवसरमा हार्दिक शुभकामना !
एमालेले कानेपोखरीको सवै वडामा अनेमा संघ गठन गर्ने